Mareykanka oo min $3 Milyan dollar duldhigay saddex ka mid ah saraakiisha Alshabaab – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Washington – Mareeg.com: Wasaaradda arrimaha debadda Mareykanka ayaa min $3 Milyan oo doolaar dulk dhigtay 3 ka mid ah hogaamiyaasha Alshabaab, iyadoo lacagtaa loo ballanqaaday qofkii keena macluud horseeda in lasoo qabto 3-aad nin, islamarkaana maxkamad la hokeeno.
Saddexda sarkaal ee ka tirsan Alshabaab ee lacagta la duldhigay ayaa kala ah: Cabdulqaadir Maxamed Cabdulqaadir (Cikrama), Yaasiin Kilwa iyo nin kale oo magaciisa lagu soo koobay Jacfar, loona yaqaanno Camaar.
Cabdulqaadir Cirkama ayaa Mareykanku sheegay inuu dalka Kenya kazoo qoro dhallinyaro ku biira Alshabaab, waxaana la sheegay in ninkaani dhashay sanadkii 1979.
Yaasiin Kilwa ayaa la sheegay inuu yahay hogaamiyaha Alshabaab ee buuraleyda Gols ee deegaanada Puntland, kaaasoo uu magacaabay hogaamiyaha Alshabaab, Abuu Zubeyr.
Jacfar oo loo yaqaanno Camaar ayaa la sheegay inuu ku xigeen u yahay Cabdulqaadir Cikrama, islamarkaana uu ka mid yahay saraakiisha amniyaadka loo yaqaanno ee Alshabaab, kuwaasoo qorsheeya dilalka loo geyso dadka Alshabaab bartilmaameedsanayaan.
C/qaadir Cikrama ayaa ka badbaaday weerar diyaaradaha Mareykanku ku qaadeen guri ku yaalla degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose bishii November 2013, iyadoo lagu eedeeyey inuu agaasimay weerarkii lagu qaaday xarrunta ganacsiga Nairobi ee Westgate bishii September ee sanadkii 2013.
Wasaaradda arrimaha debadda Mareykanka ayaa sheegtay in Alshabaaab kumanaan isugu jira shacab, bulshada rayidka ah iyo ciidamada AMISOM ku dileen Soomaaliya sanadihhii lasoo dhaafay, taasoo keentay in Mareykanku ku daro liiska ururada uu u yaqaano argagixisada sanadkii 2008.
Mareykanka ayaa bishii June ee sanadkii 2012 lacago xoog leh sidaan oo kale u duldhigay hogaamiyaasha Alshabaab, iyo rag hogaanka uga jiray meel dhexe.
Hogaamoyaha Alshabaab, Axmed Cabi Aw-Godane oo loo yaqaano Mukhtar Abu Zubeyr waxaa madaxiisa la saaray lacago dhan $7 milayn oo doolar, waxaa min $5 milyan oo doolar madaxooda la saaray hogaamiyaasha kala ah Ibrahim Ibrahim Haji Jama (Ibrahim Afgan), Fuad Mohamed Khalaf, Bashir Mohamed Mahamoud iyo Mukhtaar Robow Cali (Abuu Mnasuur).
Sidoo kale dowlada Mareykanka waxay mid $3 million dul dhigtay madaxyada Zakariya Ismail Ahmed Hersi oo ah madaxa muqaabaraadka Al Shabab iyo Abdullahi Yare oo isna lagu sheegay sarkaal sare oo Al Shabab ah.
Sidoo kale bishii Maarso ee 2013 ayaa Mareykanku min $5 Milyan oo doolar Cumar Xamaami oo loo yaqaanay Abuu-Mansuur Al-Amriiki iyo Jehad Serwan oo loo yaqaano Mustaf.
Ibraahim Afgaan oo Soomaali ahaa iyo Abuu Mansuur Al-amriki oo Mareykan ahaa oo ka mid ahaa ragii Alshabaab ee lacagta la duldhigay waxaa sanadkii tegay ee 2013 dilay dagaalyahano taageersan hogaamiyaha Alshabaab kadib markii khilaaf muddo socda soo kala dhexgalay.
Somali PM welcomes IGAD support